स्वास्थ्य मन्त्रालयले सच्यायो गल्ती, कोरोना संक्रमितको संख्या २ सय ४५ : RajdhaniDaily.com
Homeप्रदेशप्रदेश २स्वास्थ्य मन्त्रालयले सच्यायो गल्ती, कोरोना संक्रमितको संख्या २ सय ४५
जनकपुरधाम । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिहीबार बिहान ७ जना नयाँ संक्रमित थपिएको भनेर दिएको सूचना त्रुटिपूर्ण देखिएको छ । धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा ५ जना नयाँ संक्रमित थपिएको भनेर मन्त्रालयले दिएको सूचना गलत पाइएको हो ।
धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा पाँचजना संक्रमित पाइएको पुष्टि गएको मंगलबार नै मन्त्रालयले गरेको थियो । मन्त्रालले मंगलबार जिल्ला र उमेर मात्रै कोड गरेर विज्ञप्ती निकालेको थियो । आज बिहान भने संक्रमितको जिल्लाको स्थानीय तहको ठेगाना र उमेर समेत खुलाएर पुनः विज्ञप्ति निकालेको छ ।
जसमा धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा फेला परेका कोरोना संक्रमितको उमेर मात्र हेर्दा मन्त्रायले गरेको त्रुटि प्रष्ट हुन्छ । यस अनुसार हेर्दा बिहीबार बिहान २ जना मात्रै नयाँ संक्रमित थपिएका हुन् । हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २ सय ४५ मात्रै हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको यसप्रकारको गल्तीको निकै आलोचना भइरहेको छ ।
समाजिक सञ्जालमा निहालराज सिंहले लेखेका छन तर यो कसरी हुन सक्छ! गिन्ती न जान्ने मन्त्रालय ले कसरी कोरोना लाई रोक्छ प्रश्न गरेका छन । घनश्याम राउतले लेखेका छन्, ‘गल्ती हाम्रै हो कि यस्तो नमुनाहरुलाई जिताएर पठाए छौ ।’ उनले सरकारमा बसेका व्यक्ति स्वास्थ्यको मामलामा गम्भीर नरेहेको आरोप लगाएका छन । राजविकास साहले खै के हो कुरो बुझ्न गाह्रो छ नेपालको । कस्को पत्त्याउनु कस्को नपत्याउनु ? उनको पनि त्यस्तै आक्रोश रहेको छ ।
परिवार पाल्न नसकेपछि आत्महत्या !
इटहरी । अहिले लकडाउनका कारण आम मानिस समस्यामा छन् । समस्यामा मात्रै नभई कतिले त प्राण त्याग नै गरिहरेका घटना पनि विद्यमान छ ।...
लाङटाङ सद्भावना दूतसमेत रहेका पत्रकार अशोक सिलवालको पछिल्लो पुस्तक ‘श्रीलंका स्मृति’ उनकै गाउँ फिकुरीमा विमोचन भएको छ । फिकुरी ट्रेल एक्सप्लोरेशन ट्रिपमा सहभागी...
उपत्यकाका सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालका बनाउने निर्णय
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – १७ असार
प्रतिगामी षडयन्त्रमा नलाग्न युवासंघकाे चेतावनी
अफगान सरकारद्धारा १५०० तालिबान लडाकू हिरासतमुक्त
सरिता दाहाल - July 28, 2021